DEG DEG+DAAWO: Wasiirka Gaashaandhiga Somaliland oo ka hadlay dagaalka ka socda Tukaraq,una Hanjabay Puntland – Marqaanmedia24.com
DEG DEG+DAAWO: Wasiirka Gaashaandhiga Somaliland oo ka hadlay dagaalka ka socda Tukaraq,una Hanjabay Puntland
May 15, 2018 maqal iyo muuqaal, wararka 16
Wasiirka Gaashaandhig Maamulka Somaliland Ciisa Axmed Yuusuf iyo Wafdi uu hogaaminayo oo gaaray magaalada Ceer gaabo ee Caasimadda Gobolka Sanaag ayaa ka hadlay xiisada ka soo cusboonaatay deegaanka Tukaraq ee Gobolka Sanaag.
Dagaal u dhaxeeyo Ciidanka Puntland iyo Somaliland ayaa ka socda deegaanka,waxaana badi dadka ay ka barakaceen guryahooda,sida ilo xog ogaal ah inoo sheegeen.
Wasiirka Difaaca Maamulka Somaliland ayaa sheegay deegaanka uu yahay furin dagaal,balse hadda xaalada ay tahay mid degan oo aanay wax dagaal ah ka jirin.
Maamulada Puntland iyo Somaliland ayaa isku heysta gacan ku heysta deegaanka Tukaraq,waxayna deegaankaasi noqday furin dagaal oo labada dhinac isku hor fadhiyaan.
DAAWO VEDIO: Ciidanka Somaliland oo Heegan la geliyay & dagaal culus oo hadda ka socda Tukaraq
DAAWO SAWIRADA:Cali Khaliif oo Dhex Fadhiya Xuska sanad Guurada 18 May Soomaliland
intii ku dhimatay Allaha u naxariisto
Dagaal baadhil ku salaysani daalimiinta uun bay guuldaradu ku dambeysaa sida taariikhda laga xigan karo. “Somaliland” waa wax aan jirin waayo dal dunida ka tirsan iyo maamul goboleed rasmi ah mid na ma aha. Qabiil xaq daro ku taagan oo magaciisa ka baqaya in uu dhagartiisa u adeegsado ayaa ku hoo daba dhuumanaya. Waa qalad in Puntland oo ah geyi iyo maamulkiisa oo rasmi u jira iyo la is barbar dhigo maamul aan asalka ba jirin.
Puntland gobolladeeda iyo degmooyinkeeda waa kuwo iyana si rasmi ah uga jira dalka Soomaaliya. Xuduudaheedu dadkii ikhtiyaarkooda iyo rabitaankooda maamul ahaan isugu baheystay ee asal ahaan na geyiga ku dhaqan ayay u cayiman yihiin oo in ay difaacdaan xaq buuxa u leh. Bal kuwan aan ahayn dal iyo dawlad goboleed rasmi u jira toona xuduudahan ay sheeganayaan ee ay u dhimanayaan maxay ku salaysan yihiin? Deegaan ay leeyihiin ma aha oo dhul iyo dhalasho midna dhaxal u ma leh.
“Ingiriis” baa waa xuduudo xaaraan ah geyigan ka xarxarriiqday waa sax laakiin qarni baa ka soo soke maray oo baab taariikhda ku duugan oo uu Ingiriisku ba iska illaaway weeye. Bal kuwan xuduudahaas sheeganaya ee qiilka ka dhiganaya dhaxaltooyo u ma leh oo dhal Ingiriiska ka hadhay ma aha ee maxaa ka khuseeya isqoornimada iyo doqonnimada intaas la’eg?
hawiye le kala celinkara darood iyo isaaq.
SHALAY MAANTA U EKAA(xikmo carbeed)
afkaaga caano lagu qabay cawadoow si fiican baad u tiri.
hayeeshee nimanka iisdoor saan tuurturyo niman ku baxaya maaha. sida kaliya oo lagu saari karo ama lagu muquunin karo waxaan aaminsanahay inay tahay in 3 ilaa afar jiho laga wajaho halkaanoo ciidanka puntland isla markaasna cuskanaya dadka deegaanka ay operation in full scale” lagu qaado..
sida haatan xaalo tahay iima cuntanto- balse ogoow liite doora leh waa ku qancaa is tuuryayntaan noocaana.. sida la filan karo waxay ku danbayn sidii dagaaladii istuuryaynta ku salaysnayd ee MAXJARKA gaalkacyo ka dhici jiray aakhirkiina ay guushu ku raacday mooryaanta galmudug kadib markii in la iska daafaco mooyaane la diiday in ciidamadii puntland ay dardaraan afar mooryaan oo go’doon ku ah xaafada baraxleey. arintaas waxaa ka danbeeyey gaas oo amar buuxa ku siiyey nuqadimiinta ciidanka puntland inaysan ka bixi karin goobohooda iyo dhufaysyadooda.
haatana wiilka reer boqoroow iga qor tan (mark my words) in inta la is xoogaa xabad tuuro deetana lagu kala tago.
once again waa ku diirsadaa sidaad dadkaaga reer harti u garab taagan tahay
xaalkeenu waa halkii uu ka gabyey cali aadan cali dhuux-cayn iyo hartaad leedahaye caraqda fuuqfuqso
MOORYAAN SOMALI DOORAALE
hada baan isha ku dhuftay hadalkii caatada ahaa ee aad igula dul kuftay isla markaasna ku garab taartey ina adeerkaa khaldaan iidoor.
waxaad hadal ba’yeey ku sheegtay inaad si kasta noo xasuuqdeen
waxaad hadal hoogayeey ku sheegtay in cabdulaahi yuusuf uusan waxba ahayn ee xasuuqii idin gaaray ay xabashi idiin gaysteen.
jaalkaa axmed khaldaan dhaadhaanyohow yuusan ku maqal waayo hadba cidii xasuuqu ku danbeeyo baa ciilna ku danbayn. ani ma diidani in daaduumo i gaartay oo dhinacna uusan ii cayman
NINAAN AARSAN UUROOW KU JIRYAA (maahmaah hawiye)
hayeeshee waanigii ka dubaaqay oo inta hubka iyo magliga la baxay dacarta ku leefsiiyey deetana waadigii yaman iyo meel waliba naf ula cararay. jabkii kusoo gaarayna aad si fiican uga dharagsan tahay.
laakiin mooryaanoow anigu waa anigii sida axmed ii qiray aarsadaye maxaa kuu diiday inaad samayso sidii ani aan sameeyey oo gaalkacyo baad fadhidaane inta soo duushaan maad wax xasuuqdaan. mise inaad alshabaab meel waliba dadka ku dhufoo ka carar wax ku tahluukeeya baa kugu filnaatay inaad ku ekaato.
dhanka kale in habashi ay wax xasuuqeen- hadee iska barooro, ood jiidis iyo qaadis waa isla guri gayn.
waxaan kuugu darayaa liite in dagaalkii khaliijka ay aad u dagaalameen masar khadar yukrain bulgaariya marooko urugway arjantiina LAAKIIN YAA LIBINTA MEEL CIDLADA AH KA QAATAY? waa suaal da’ wayn mooryaanoow!!
aan kuu sheegee dalka maraykanka oo qasaaradii gaartay ay aad u koobnayd baa libintii dhamaan dhabarka u ritay halkii wixii ku rogmaday ay ahaayeen wadamadii kale ee garab istaagnaa USA.
HADABA waxaani waa COALlISSION AMA GAASHAANBUURAYSI, NIN KASTANA MA SAMAYN KARO INUU INTA RAG KALA MAANA OO KALA MISKAXA U TAGO KA DHAADHACSIIYO IN FIKIRKIISA AY U DAGAALAMAAN. waa wax arintaasi alle hibo nooga dhigay oo xitaa doorashadii kenya waxaa anaga na doortay hawiye iyo isaaq aan iyagu waxba isu ogolayn
mooryaanka digir ku quraacde
you and your comrade mr khaldaan have one thing in common denominator-that is you fail to give pay back in retribution.
ha idiin macaato
@ INA BOQOR LIBAAXA MUDUG,
Ina boqoroow aad baan ugu mahadsan tahay guubaabada gobeed iyo guusha aad oogu shin tirisay tolkan beladu ku gadaaman tahay. Adigu libaaxoow waaweynkii baad nagu wareentaayoo mararka aad wax weyraxayso waan kuu banneeyaa dee kkkkkkkkkkkk.
Runtii gobta aynu libaaxoow ka soo faracannay dulmiga iyo dhiigga sokeeye oo la kala galo dhaqan iyo caado toona u ma leh hase yeesho ee daalim aad iska abhisay oo dugsigaaga kuugu soo galay in aad iska dullaamiso diinta ayaa inoo fasaxday. Ma jeclin in la is fara saaro laakiin dantu haddii ay kalliftay dee daalimkaa ka masuul ah.
Sida aan soo tibaaxay annagu inoo ma muuqdaan mabda’a ay “Somaliland” ku dhisan tahay iyo macnaha ay tarjumayso toona. Diin iyo dan Soomaaliyeed midna u ma taagna oo Shareecada Islaamka iyo sharciyada iyo xeerarka caalamka ka shaqeeya ku ma salaysna.
Yaa xaqaa u siisay? Yaa u banneeyay? Yaa faray in ay Soomaali kale ee aan waxba galabsanin iskaga duulaan bal waallida intaas dhan?
ABSOLUTELY CISMAN-WAA SAAS
Horta Labadeenu waxba iskuma seeganin oo adna wax baad qirataa ana waan qirtaa. Taasna raganimadu waa tay ku jirto.
Hadaan intaas kasoo gudbo waabad wanaagsan tahay inaad qiratay kolkii Afweynena aad Dawladii Afweyne ee quwadii Somaaloo dhami ku dhameyd kolba qolo ku gaadeyseen kuna hoos gabaneyseen. Tii C/Laahi Yuusufna aad Cadaw Soomaaliyeed soo adeegsateen. Adigu is gaashaabuureysi inay aheyd ayaad ku faantay. Aniguse markaan kasoo gudbo ta Koonfureed aad tihiin ahaan, saan horeba u idhi idinku Aargoosiga ayaad ku dheereysaan. Laakiinse Hawiyuhu waa halkii Somaliya birtiisii ayuu idinku asley. Sax iyo Khalad imika kuu kala geli maayo. Warankii aad ku taagteen idinka oo Dawladii dhameyd ee Soomaaliyeed ku hoos gabanayana gacmahooda ayay iskaga gooyeen. Saasaanay ku ciil baxeen. Kolkii C/Laahi Yuusuf Dawladiisii aad dhankaas iyo Muqdisho isku shubteen waxay aheyd in idinka oo mudh iyo gacan ah aad nimankaas wax yeeleysaan. Laakiinse taas waad ku dhici kari weydeen (hence) oo Xabashi oo ah Cadaw Soomaaliyeed kii ugu xumaa ayaad soo adeegsateen. Taasi sharaf iga wallee inaanay idiin aheyn. Waxay muujinaysaa uun isku kalsooni la’aan iyo inaydaan kelidiin gaashaanka daruuran karin.
Tan Woqooyiga iyo Iidoorka. kkkkkkk Saan hore kuugu idhiba anagu Aargoosiga iyo maato dooxu dhaqan nooma ahan asal ahaanba. Guusheyda aan tirsanayaana waa anaga oo Geyiga Somaliland dadkeedii isku keenay oo is cafinay oonan dagaal ehli an oo lagu dhamaado aanaan dhigin. Illaa iyo 1991 kolkaanu ciidamadii Afweyne eenu qabanay iyo maxaabiistii kaleba isa dhaafinay (save passage). Kumanaankaa kun ee abaal ay noo dhigtaan baad sheegeysaaye anaga na leynayay oo keli ah hadaanu dilno iga wallee inaanay labo Cali su’aal iska weydiiseen. Laakiinse anagu qaanuun iyo xeer ayaanu ku soconay. Sharciyada dagaalkuna waanu xaq dhowraynay. Imikana waanu xaq dhowrnaa. Hadaba aniga taasi sharaf ayay ii tahay oo waxaan ku samray inaan dhulkeygii nabad iyo caano ku heysto. Alxamdullilaahna aan joogo. Se aanay dib danbe u dhici doonin in niman isla qabweyn ama qaar kale oo damaaciyiin ah oo ama hab qabiil wax ku raadinaysa ama hab kaloo munaafaqnimo ahe inaanan u suurto gelin inay wax danbe oo tacadi ama daan daansi ah igula kacaan xitaa indhaha haday dhiig ka keenaan. Waa inay iisoo badheedhaan oo ay nafta inay huraan banaanka iigu yimaadaan. Kolkaas ayay ii banaan tahay inaan dhiigooda tashiilo oon si wanaagsan uga shaqeysto. Laakiinse maati iyo biri ma geydo iyo waxaan xeerarka dagaal ku jirin baan ku kacayaa waa xaasha iyo xurmo daro ayay naga tahay. Cadow soo kaashona warkeedaba daa, taas iyada halkaas iga dhig waa dulinimo asal ahe.
Hello Tukaraq tell me how you doing!!
Islaanta khaayinimo iyo munaafaqnimo iyo been quruurixinta weynu ku ogayne imikana ma iska oohin been been iyo ilmadii yaxaaska ayay ku darsatay? kkkkkkkkk
Ilmada cesho baan kuleenahay boowe Magacyo Badanow khayaaligan qabiilka ku dhisani inaanu soconeyn weydin ogeydeene.
Soo badheedhaye daaha dabadiisa ha’isku qarin markay dhiida gaadho. Maanta Dhiidii ayay joogtaaye Mr. Libaax dhankiisa wuu kasoo gurxamay inkastooy shiid yar aheyd ee adigu ama dhankaaga wadhafka kasoo tuur hadii kale geeraarka iyo buraaburkuba wey kaa xidhan yihiin.
Kkkkkk anigu wax kale kuma darayee hal uunbaan oranayaa nimankaa is daba dhaboolaqay ee tukaraq u tanaagooday..RAG GOGOL XUN IYO WARAABE GOD XUN GUGOOGA MA GAARAAN.bal aan aragno waxaad ka keentaan.anigu Wali MA arag dhabayaco duushay oo guul la soo hoyatay IGA WALOO WAA CALAACAL TIMO LEH kkkkk
Kkkkkk DAMEER MADOOBE anagu digirta waa hidaha yaga xalaasha ah adiguna waa cuntada aad ugu jeceshay ilaayn adigaa ugu WAN QALAY……BEER DAAROOD sidaa daradeed xiliga hada LA taagan yahay waxaan siisanaa DAMEERAHA sida adigoo kale…..kkk kkk markii aad tiraahdeen BEER DAROOD ayaan ku bilaawnay in aan quudka dameeraha ka dhigno….
War heedha ma iska daynaa hadalka iskeeda bilaado
Mooryaanoow sodee u oran kartaa majeerteen duulay waa calaacasha oo timo kasoo baxeen. War heeddhe wixii ani iyo khaldaan aan halkaan wax isu qirnay oo ninba ninka kale u qiray raganimo adi waxba kuma maraan?
War nacasyohow ciidamada shisheeye ma aanan qarsan oo doorashadaan ku galy in ciidam tababara somalida la helo. Ciidamada waxaa aqlabiyad ku ansixiyey baarlamaanka aomalida iyagaana masauul ka ahaa inkastoo aan baarlamaanka anagu horgaynay. Hello? waana waxaan geed shwer iyo mid gaaban u koray si adigoo mooryaana haylahda laguu cunsiiyo. Hadaba ama dafir oo inkiraad qqaawan lasoo bax ama sida axmed raganimo ku qiro.
War miyaadan iiisoo kaxaysan dir iyo shiikhaal war miyaan iidoor ku kaabayn oohiil iyo hoo kula garab taagnayn. Markii lagaa gool batay baad kasoo shir tagtay ciidamo shisheeye
War ninka kaa cayriyey garoonka gaalkacyo oo aad maalin waliba canshuurta u keenayso sidee hadalkaas kula soo haboowdaa? Dee hada kadib dood aan kugu soo gamaa waa hal bacaad lagu lisay.qof miskaxdiisa aanay waxba galayn oo qalbi xiran. .yMarmarsiinyo ka dhigo xabashi baa na xasuuqday illeen caruur waxba maadan dhaamin
Kkkkk kkkkkk DAMEER MADOOBE qisa yar ayaa waxaay leedahay war MA waxaad awoodi kari waayday inta aay awooday cajuusadii reer banuu israa,iil.war hankaagu yaraa.war hankaagii MA waxaad ku soo koobtay in garoonkii gaalkacyo oo aan 650 wiil aan Mar hore kaa xabaalay in furahiisa diyo ahaan kuugu hibeeyay markii aad goroda laad laadisay aan u tanaagooday in birta ka soo aslo hartigii kismaayo ku noolaa caku garsho xumaaaa oo siyaasad yaraa.orod oo dhagaayso heshiiskii gaalkacyo.markaas Igala xiriir waxaad Kala kulanto.wali tariiqda ku hayo DAAR’OOD inta dagaal u xaayd xaaydtay guul LA dhacadiido.midaa garoonka gaalkacyo anigaan u baahnaayn waqtul xaadirkaan in aan ku dagaalamo.maxaa wacaay isagoo wiil habar gidir ah uu san iiga dhiman ayaan magac waayn huwiyay ilaayn waxaan iri GALMUDUG yaa xawayaan.adeerkaa GAASNA doolaha ayuu ii lulay waa tuu GALGADUUD iska laad laadiyay.kkkkkk kkkkkk Ala DAMEER MADOOBOOW maxaay siyaasad idinka guurtay………
car la kaalay taariiq dhabayaco duushay oo guul LA soo hoyatay.anigu waxaan ahay ninkii aad ku dhici waayday oo adigoo xabashi dhagaha ku haaydo aad iilaa timi.markii la isticmaalayna lagu eryay kkkkkk oo waliba waxaan kaaga soo haray meel tariiq leh.bal la kaalay taariiq intaa meesha wax ku qorta qancida oo aad leedahay.in aad gumaaysi u adeegto mooyaane.kkkkkk